Dab khasaare naf & maal geystey oo ka kacay degmada Qardho ee Karkaar (SAWIRO) – SBC
Dab khasaare naf & maal geystey oo ka kacay degmada Qardho ee Karkaar (SAWIRO)
Wararka ka imaanaya degmada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar ayaa sheegaya in dab ka kacay xero qaxooti oo ku taal deegaankaasi uu geystey dhimasho & khasaare guryo cooshado ah. Inta la ogyahay dabka waxaa ku geeriyootey laba caruur ah oo ku sugnaa gudaha gurigii dabku ka kacay, kuwaasi oo ay u suurtagali wayday dadkii gurmad inay badbaadiyaan maadamaa waalidkood ay ka maqnaayeen xiligii dabku kacay oo ay ku jireen gudaha guriga gubtey.Safiyo Isaaq Malaaq oo ka mid ah dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeradaasi qaxootiga ayaa u sheegtey SBC Online in dadbka ka kacay xerada qaxootiga ee Tawakal caruurta ku geeriyootey ay kala yihiin wiil 3 sano jir ah iyo gabar laba sano jir ah, kuwaasi oo ku geeriyoodey dabka iyagoo mayd ahna laga soo saarey gurigii ay ku jireen.
Dadweynaha degmada Qardho & dadkii ku dhaqnaa xeryada qaxootiga Tawakal ayaa gacan weyn ka geystey daminta dabkan, inkastoo magaalada Qardho aanay laheyn dab damis hadana booyadaha biyaha dhaamiya ayaa qayb ka ka ahaa ololalahii xooganaa ee biyo dhaaminta lagu doonayey in dabka lagu hakiyo. Lama oga ilaa iyo hada sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya daminta dabkan khasaaraha geystey, waxaana socda baaritaanka arinkan ku aadan ee ay wadaan maamulka deegaanka.
Galabta ayaa lagu wadaa in lagu aaso qabuuraha degmada Qardho labadii caruurta ahaa ee ku geeriyootey dabkaasi, waxaana culuma’udiinka degmada Qardho ay ugu baaqeen Ganacsatada & dadka waxhaysta inay taageeraaan qoyska ay ka geeriyoodeen caruurta.
Dhinaca kale maamulka degmada Qardho ayaa ugu baaqay maamulka dhexe & hay’adaha samafalka inay gargaar deg deg ah la soo gaaraan dadkan waxyeelada dhimashada & khasaaraha maaliyadeed ka soo gaarey dabkan.
Apriil 22, 2011 at 7:05 pm
aad baan uga axumahay dabkaas
Apriil 23, 2011 at 12:01 am
waa wax laga xumaadi amsakiinta qaxootiga guryahooda ka gubteen
Apriil 23, 2011 at 1:53 pm
ilahay dadkas hau gar garo amiin amiin